LocalVox: Mpaghara na azụmaahịa azụmaahịa | Martech Zone
LocalVox: Mpaghara na Nzụ ahịa Azụmaahịa
Enwere ihe karịrị 100 nde ọchụchọ mpaghara kwa ụbọchị na 88% n'ime ha na-akpọ ma ọ bụ gaa ụdị azụmahịa ahụ n'ime awa 24! ObodoVox bụ mpaghara, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, yana ịzụ ahịa azụmaahịa na-enyere azụmaahịa obodo aka ịre onwe ha n'ịntanetị, gafee netwọkụ nke ndị na-ebipụta akwụkwọ, mgbasa ozi mmekọrịta, ọchụchọ, mobile, akwụkwọ akụkọ email & ọbụlagodi weebụsaịtị nke aka ha - ma dị mfe iji email.
ObodoVoxNgwakọta nke teknụzụ na nkwado zuru oke maka obere azụmaahịa na-achọ ịmeghe uru ahịa ahịa mpaghara. Atụmatụ gụnyere:
Communication - Na-eme ka ọ dị mfe iji kpọtụrụ ndị ahịa gị dị ugbu a site na email, mgbasa ozi mmekọrịta na ekwentị - niile na ntinye otu bọtịnụ.
SEO mpaghara - na - enyere gị aka ịchọta ndị ahịa ọhụrụ site na ịkachasị otu ị si nọrọ na Google, Google+ na narị narị akwụkwọ ndekọ aha mpaghara dịka Yelp, CitySearch, Yahoo, Bing na ndị ọzọ.
mobile - Na - emepụta mkpokọta mkpanaka ma na - ebipụta mmelite na weebụsaịtị gị na akpaghị aka iji nyere aka tọghata ndị ahịa ọhụụ ma nye ndị ahịa dị ugbu a ihe kpatara ịlaghachi.
Nchịkwa nchịkwa - Na-akpaghị aka nyochaa aha mmekọrịta gị ka ị nwee ike ịnweta ozi ọ bụla oge ọ bụla ịchọrọ ịzaghachi nyocha Yelp ma ọ bụ CitySearch, okwu Facebook ma ọ bụ nzaghachi Twitter.
Mmekọrịta - Gbanye ndi ahia ohuru site na ichota ndi di nso na ekwe nti ha n’enye ha ebe ha n’enweta ego nile.
akuko - Na-enye gị akụkọ kwa ọnwa ị nwere ike ịghọta na metrik nke pụtara azụmaahịa.
Get a Nkọwa mpaghara SEO n'efu site na LocalVox ma chọpụta ebe azụmahịa gị na-ahụghị!
Tags: Analyticsemail Marketingobodo seoahịa efuazụmahịa onlineSocial Media Marketing
Seth Godin ezighi ezi banyere ọnụọgụ
Nke ahụ dị mma nke ukwuu, mana m chọrọ ịmatakwu gbasara "nkwukọrịta".